Astaamaha Wordpress 3.0 | Naqshadeynta Webka | Roundpeg
WordPress 3.0 - Ma Sugi Karo!
Sabtida, Juun 12, 2010 Khamiista, Oktoobar 29, 2015 Ball Lorraine
Anigu ma ahi farsamo dhanka tababarka ama dabeecadda, sidaa darteed marwalba waxaan raadiyaa qalab ii oggolaanaya inaan ka ciyaaro bulshada tiknoolajiyada. Laba sano iyo bar ka hor, waxaan helay WordPress, aniga ahaanna wuxuu ii ahaa beddel ciyaar.
Isticmaalka WordPress oo ah nidaamka maareynta maareynta, waxaan qaabeyn karnaa, fiirin karnaa xirfad, fudud oo loogu isticmaali karo degellada macaamiisheenna ganacsiga yar. Liiska weligiis koraya ee plugins-ka ayaa noo oggolaaday inaan abuurno goobo aad iyo aad u adag, oo leh astaamo u dhigma bogagga qaabeynta loo qaabeeyey ee laga heli karo qiimo aad u sarreeya. - Marka si khafiif ah loo dhigo, waxaan ahay WordPress Fan.
Cusboonaysiin kasta, waxaa jira astaamo aad iyo aad u tiro badan oo shaqadayda u fududeynaya una fududeynaya nolosha macaamiisheenna. Iyo hada, WordPress 3.0 waxaa loo qorsheeyay in la sii daayo Isniinta. Intee in le'eg ayuu ka sii fiicnaan doonaa noocaan cusub? Warbixinadii hore ee tijaabiyeyaasha Beta waxay tilmaamayaan astaamo cusub oo cabsi leh:
Noocyada Boostada Gaarka ah: Nooca hore waxaad ku abuuri kartay qoraallo iyo bogag, hadda waxaad u abuuri kartaa qaabab dheeri ah noocyada macluumaadka gaarka ah, markhaatiyada, su'aalaha la iska waydiiyo, macmiilka ama astaamaha shaqaalaha, liiska suurtagalka waa inta ay le'eg yihiin noocyada shirkadaha isticmaali kara.
Qoraaga Qoraaga: On blogs qorayaal badan oo kan oo kale ah, qoraa kasta wuxuu yeelan karaa "qaab" u gaar ah. In kasta oo milkiileyaasha degmadu ay weli xakameynayaan muuqaalka oo dhan oo ay dareemayaan inay ilaalinayaan sumcadda astaanta, tani waa inay u oggolaataa xoogaa shakhsiyadeed oo soo dhex gala. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay muuqaalkan gaarka ah wareeg ku qoro maaddaama xubin kasta oo ka mid ah kooxdaydu ay bilaabayaan inay qoraan waxyaabo badan oo dheeraad ah.
Maareynta Liiska: Nooca hore, dalbashada bogagga iyo bogagga hoose waa in lagu maareeyo qoraal kasta. Ku darista bogga way fududahay, laakiin helitaanka barta saxda ah ee marinka waxay noqon kartaa xanuun, gaar ahaan haddii aad leedahay bogag badan. Lahaanshaha hal muhiim
Widgets Footbar Sidebar: Waxaan si isdaba joog ah u adeegsanaa mawduucyada saxaafadda ee Studio sababtuna tahay muuqaalkan oo noo oggolaanaya inaan abuurno raad raac hodan ah oo ka muuqda bog kasta. Waan ku faraxsanahay inaan arko tan lagu daray 3.0 heer ahaan.
Mideynta Goobta Kali ah iyo Multisite: In kasta oo macaamiishaydu aysan daryeeli doonin, tani waxay noo noqon doontaa horumar weyn, maaddaama aan ku darno bogag badan. U beddelashada qaabka MU-ga ayaa noo oggolaan doonta inaan cusbooneysiino khadadka iyo waxyaabaha hal mar ah, oo aan soo noqnoqon!
Waxaa jira waxyaabo badan oo kale oo xiiso leh oo leh cusbooneysiintan! Ma sugi karo inaan tijaabiyo dhammaantood. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa aad ugu jeceshahay sida ugu wanaagsan ee aad u bilaabayso inaad ku shaqeyso nooca cusub.
Tags: qoraaga qoraagamaaraynta menumultisiteWordPresswordpress 3wordpress 3.0
Lorraine Ball Saturday, June 12, 2010 Thursday, October 29, 2015
Lorraine Ball labaatan sano oo shirkad Mareykan ah, ka hor intaanay miyirkeeda u soo noqon. Maanta, waxaad ka heli kartaa iyada - Roundpeg, shirkad suuq-geyn yar, oo fadhigeedu yahay magaalada Karmel, Indiana.
Iyadoo ay weheliso koox tayo sare leh (oo ay ku jiraan bisadaha Benny & Clyde) waxay la wadaagaysaa waxa ay ka ogtahay naqshadeynta webka, soo galida, warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta emailka.
Waxaa ka go'an inay gacan ka geysato dhaqaalaha firfircoon ee ganacsiga ee Bartamaha Indiana, Lorraine waxay diiradda saareysaa inay ka caawiso milkiileyaasha ganacsiyada yaryar inay gacanta ku dhigaan suuqgooda.
Jun 12, 2010 saacadu markay ahayd 10:03 AM
* DONT_KNOW * Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko waxa 'dhadhanka' ah ee MU ay isku darayaan. Multi-domain-ku ma ahayn muuqaalka aasaasiga ah ee MU oo way adkayd in la hirgeliyo (waxaan samaynay hirgelinta goobta 14) astaamaha qaarna si siman uma aysan ahayn (sida ku rakibidda fiilooyinka dhammaan shabakadaha weligood uma muuqan inay shaqeeyaan). Waxaan ka taxadari lahaa isticmaalka MU si aan u martigaliyo macaamiil fara badan isla isla, waxay u baahan tahay inaad guurto DHAMMAAN macaamiisha haddii ay dhacdo in qofku u baahdo inuu u guuro jawi deg deg ah, ama ay doonayaan inay ugu dambeyn martigeliyaan tooda.